23 Achinyatsotarira boka reSanihedrini Pauro akati: “Varume, hama, ndakazvibata pamberi paMwari nehana yakachena+ kwazvo kusvikira nhasi.” 2 Mupristi mukuru Ananiyasi akabva arayira vakanga vakamira pedyo naye kuti vamurove+ pamuromo. 3 Pauro akabva ati kwaari: “Mwari achakurova, iwe madziro akadzururwa nevhu jena.+ Unogara pasi kuti unditonge maererano noMutemo+ asi, uchidarika Mutemo+ wacho, unorayira kuti ndirohwe here?” 4 Vaya vakanga vakamira pedyo vakati: “Uri kutuka mupristi mukuru waMwari here?” 5 Pauro akati: “Hama, handina kuziva kuti ndiye mupristi mukuru. Nokuti zvakanyorwa kuti, ‘Usataura zvinokuvadza pamusoro pomutongi wevanhu vokwako.’”+ 6 Zvino Pauro paakaziva kuti rimwe boka rakanga riri revaSadhusi+ asi rimwe revaFarisi, akashevedzera ari muSanihedrini achiti: “Varume, hama, ini ndiri muFarisi,+ mwanakomana wevaFarisi. Ndiri kutongwa+ nokuda kwetariro yokumuka+ kwevakafa.” 7 Kukakavadzana+ kwakavapo pakati pevaFarisi nevaSadhusi nokuti akataura izvi, uye vanhu vazhinji vakakamukana. 8 Nokuti vaSadhusi+ vanoti hakuna kumuka+ kana ngirozi kana chisikwa chomudzimu, asi vaFarisi vanozvizivisa zvose pachena. 9 Naizvozvo pakava nemheremhere huru,+ uye vamwe vevanyori veboka revaFarisi vakasimuka, vakatanga kuita nharo dzinotyisa, vachiti: “Hationi chinhu chakaipa nomurume uyu;+ asi kana chisikwa chomudzimu kana ngirozi yakataura naye,+—.” 10 Zvino kukakavadzana kwacho pakwakava kukuru, mutungamiriri wehondo akatya kuti Pauro aizoitwa kanyama kanyama navo, akarayira boka revarwi+ kuti riburuke rimubvute pakati pavo, rimupinze mudzimba dzevarwi.+ 11 Asi usiku hwakatevera Ishe akamira pedyo naye,+ akati: “Shinga kwazvo!+ Nokuti zvawave uchipupura kwazvo+ pamusoro pezvinhu zvine chokuita neni muJerusarema, naizvozvo unofanirawo kunopupura muRoma.”+ 12 Zvino pakwakaedza, vaJudha vakarangana,+ vakazvisunga nemhiko ine kutuka,+ vachiti vakanga vasingazodyi kana kunwa kusvikira vauraya Pauro.+ 13 Kwaiva nevarume vanopfuura makumi mana vakarangana izvi zvikasungwa nemhiko; 14 uye vakaenda kuvapristi vakuru+ nevarume vakuru, vakati: “Tazvisunga kwazvo nemhiko ine kutuka kuti hatifaniri kudya kana chinhu zvacho kusvikira tauraya Pauro. 15 Naizvozvo, imi pamwe chete neSanihedrini taurai pachena nomutungamiriri wehondo nei achifanira kuuya naye kwamuri sokunge kuti munoda kunyatsoziva zvakarurama nyaya dzine chokuita naye.+ Asi asati asvika pedyo tinenge tagadzirira kumuuraya.”+ 16 Zvisinei, mwanakomana wehanzvadzi yaPauro akanzwa nezvokumuvandira kwavo,+ uye akaenda, akanopinda mudzimba dzevarwi, akazviudza Pauro. 17 Naizvozvo Pauro akashevedza mumwe wevakuru veuto, akati: “Enda nejaya iri kumutungamiriri wehondo, nokuti rinoda kumuudza chimwe chinhu.” 18 Naizvozvo murume uyu akamutora, akaenda naye kumutungamiriri wehondo, akati: “Musungwa Pauro andishevedza, akakumbira kuti ndiuye nejaya iri kwamuri, zvariine chimwe chinhu chokukuudzai.” 19 Mutungamiriri wehondo akaribata+ ruoko, akabva ipapo, akatanga kuribvunza vari voga kuti: “Unoda kundiudzei?” 20 Iro rikati: “VaJudha vabvumirana kuti vakukumbirei kuti muburutsire Pauro kuSanihedrini mangwana sokunge kuti vanoda kunyatsoziva zvakarurama chimwe chinhu pamusoro pake.+ 21 Zvinotokosha, musavarega vachikunyengetedzai, nokuti varume vanopfuura makumi mana vavo vakamuvandira,+ uye vazvisunga nemhiko ine kutuka kuti varege kudya kana kunwa kusvikira vamuuraya;+ uye zvino vagadzirira, vachimirira vimbiso inobva kwamuri.” 22 Naizvozvo mutungamiriri wehondo akaita kuti jaya racho riende pashure pokurirayira kuti: “Usaudza chero ani zvake kuti wandibudisira pachena zvinhu izvi.” 23 Akashevedza vamwe vaviri vevakuru veuto, akati: “Itai kuti varwi mazana maviri vagadzirire kuenda netsoka kuKesariya, uyewo vatasvi vemabhiza makumi manomwe nevarume mazana maviri vane mapfumo, paawa yechitatu yousiku. 24 Uyewo, goverai mhuka dzinotakuriswa zvinhu kuti vaite kuti Pauro atasve, vamuendese kuna gavhuna Ferikisi akachengeteka.” 25 Uye akanyora tsamba yakanga iine mashoko aya: 26 “Kraudhiyo Risiyasi kuna changamire, Gavhuna Ferikisi:+ Kwaziwai! 27 Murume uyu akabatwa nevaJudha uye vakanga vava kuda kumuuraya, asi ndakabva ndangosvika neboka revarwi ndikamununura,+ nokuti ndakaziva kuti akanga ari muRoma.+ 28 Ndichida kuziva mhosva yavaimupomera, ndakamuburutsira kuSanihedrini ravo.+ 29 Ndakawana kuti anopomerwa pamusoro penyaya dzoMutemo wavo,+ asi asingapomerwi chero chinhu chimwe chete zvacho chakakodzera rufu kana zvisungo.+ 30 Asi nokuti ndakaziviswa zvavakarangana+ zvichaitirwa murume wacho, ndiri kubva ndamutumira kwamuri, ndichirayira vanomupomera kuti vamupomere pamberi penyu.”+ 31 Naizvozvo varwi+ ava vakatora Pauro maererano nokurayirwa kwavo, vakaenda naye kuAndipatrisi usiku. 32 Zuva rakatevera racho vakabvumira vatasvi vemabhiza kuti vapfuurire naye, uye ivo vakadzokera kudzimba dzevarwi. 33 Vatasvi vemabhiza vakapinda muKesariya,+ vakapa gavhuna wacho tsamba uyewo vakauya naPauro kwaari. 34 Naizvozvo akaiverenga, akabvunza ruwa rwaaibva, akaziva+ kuti aibva kuKirikiya.+ 35 “Ndichanyatsokuteerera,” iye akadaro, “kana vanokupomera vasvikawo.”+ Akarayira kuti arambe akachengetedzwa mumuzinda wamambo Herodhi.